Ungazikhuphela njani iiNgoma ezivela kwi-YouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazikhuphela njani iingoma ezivela kwi-YouTube?
Meyi 5, 2021 0 IiCententarios 332
I-YouTube yenye yeeseva eziphumelele kule minyaka idlulileyo. Ngeli qonga, abasebenzisi abanakufikelela kuphela kwinani elikhulu leevidiyo simahla kodwa banokukhetha nokwenza ezinye iintlobo zemisebenzi, umzekelo, usasaze ngqo kwaye ukhuphele iingoma.
Abasebenzisi abafuna ukukhuphela iingoma kwi-YouTube kufuneka benze njalo ngokusebenzisa ezinye izicelo okanye amaphepha ewebhu kuba eli qonga alikuvumeli ukukhutshelwa komxholo, ubuncinci kude kube ngoku. Ukuba ufuna ukufunda indlela yokukhuphela iingoma ngokulula nangokukhawuleza Siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo.
Ukukhuphela iingoma kwi-YouTube kulula kakhulu
Ngaba wawuthanda umxholo we-YouTube kwaye ufuna ukukhuphela kwikhompyuter yakho okanye kwiselfowuni? Unokhetho oluninzi lokwenza olu hlobo lwento, kodwa enye yezona zilula kwaye mhlawumbi ezona zisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi kukusebenzisa amanye amaphepha okanye iinkqubo kwiwebhu.
Sebenzisa iphepha lokukhuphela
Ukuba ufuna ukufunda indlela yokukhuphela iingoma kwi-YouTube Eyona nto icetyiswayo iya kuba kukutyelela amanye amaphepha akhethekileyo kolu hlobo lwezixhobo. Kwi-intanethi sinokufumana uluhlu olude lwewebhusayithi ezikuvumela ukuba ukhuphele umxholo we-YouTube ngokukhawuleza nangokulula.
Kukho ukungafikeleli kwamaphepha akhethekileyo ekukhupheni ingoma yeaudiyo yayo nayiphi na ividiyo ilayishwe kuYouTube. Apha sichaza inyathelo ngenyathelo ekufuneka ulilandile ukukhuphela iingoma kweli qonga:
Vula i-YouTube kwaye ukhethe ividiyo ofuna ukukhupha kuyo ingoma yeaudiyo.
Copia I-URL yevidiyo
Ukufikelela kwelinye lamaphepha akhethekileyo kumxholo wokukhuphela iYouTube. Sicebisa clipconverter.cc
Inokuba yenye yeendlela ezizezinye ezilungileyo Abasebenzisi ekufuneka bekhuphele ngayo iifayile ezigcinwe kwiYouTube. Ukwenza njalo kulula:
Vula iphepha kwisikhangeli sakho osithandayo. Ungangena ngokucofa LAPHA
Ithi phi "Isikhokelo seMultimedia"Kufuneka uncamathisele ikhonkco olikhuphele kwi-Youtube.
Ngoku khetha ifomathi apho ufuna ukukhuphela khona, kule meko ukhethe "MP3"
Cofa ku- “Qhubeka"
Iwindow entsha iya kuvela ngeendlela ezahlukeneyo zokusombulula ividiyo. Kule meko, shiya yonke into ngokufanayo kuba sinomdla wokukhupha iaudiyo kwividiyo.
Ukuqala ukhuphelo, cofa ku "Qala"
Nje ukuba ukuguqulwa kwefayile kugqityiwe, ekuphela kwento eya kuhlala ihleli cofa ku "Khuphela" kwaye ulinde ukukhuphela kwisixhobo sethu.
Kukho indlela elula yokukhuphela umculo kwi-YouTube ngaphandle kwesidingo sokubhenela ekufakweni kweenkqubo okanye ukutyelela amanye amaphepha ewebhu. Olunye uhlobo olwahlukileyo kukufikelela kuMculo kuYouTube
Enkosi kweli qonga lingakholelekiyo, zonke iividiyo ezithunyelwe kuYouTube zinokujikwa zibe ngumculo kwimizuzu nje embalwa. Iindaba ezimnandi zezokuba Umculo kuYouTube ukuvumela ukuba ukhuphele iaudiyo yeevidiyo ezininzi, Umda? Isicwangciso sobhaliso siyafuneka ukufikelela kolu khetho.
1 Ukukhuphela iingoma kwi-YouTube kulula kakhulu
2 Sebenzisa iphepha lokukhuphela
4 Umculo we-YouTube
Meyi 5, 2021
Imo emnyama kwi-Instagram